साली भेनाको एक रोमाञ्चक पल, म कोठामा ढोका बन्द गरेर पड्दै थिए घन्टी बजेको थाहै भएन…. – PathivaraOnline
Home > रोचक > साली भेनाको एक रोमाञ्चक पल, म कोठामा ढोका बन्द गरेर पड्दै थिए घन्टी बजेको थाहै भएन….
साली भेनाको एक रोमाञ्चक पल, म कोठामा ढोका बन्द गरेर पड्दै थिए घन्टी बजेको थाहै भएन….
admin August 29, 2020 रोचक	0
भाग्यमानी नै भन्नु पर्छ मेरो एकैपटक जुम्ल्याहा सन्तान भए । एउटा छोरा अनि अर्को छोरी । श्रीमती सुत्केरी भएपछी माइती जान्छु भनि । हुनपनि एकैपटक दुइ बच्चा हुदा खुसि त थियौ तर तिनीहरुलाई हुर्काउने काम सजिलो थिएन । मैले पनि श्रीमतीको बिचारलाई ठिकै माने । हुन पनि गाउबाट पदना आउदा घरबेटी कै छोरी संग प्रेम भएर बिवाह भएको थियो । कसरी प्रेम अनि बिवाह भयो त्यो अर्को कथामा लेखुला ।
जे होस न्वारन सकिने बितिकै ससुरालीबाट मान्छेहरु लिन आए । म एक्लै हुने भएकोले मलाई पनि उतै हिड्न भने मैले मान्ने कुरा भएन । काठमाडौँ भित्र भएकोले म नियमित रुपमा आउने भएर तर्किन खोजे । आफ्नो पहिलो सन्तानहरु आफ्नो आँखा भन्दा टाडा राख्ने इच्छा थिएन तैपनि बाध्यता थियो ।
*** बाँकी समाचारको पुरा भिडियो हेर्न यहाँ तल क्लिक गर्नुहोला ***
०७७ साल भाद्र १४ गते, ईश्वी सन् २०२० अगष्ट ३० तारिख आईतबार हेर्नुहोस राशिअनुसार तपाईंको भाग्य
नेपालमा काेराेनाः बढ्दो सँक्रमितकाे मृत्यु, हटस्पट बन्दै काठमाण्डाै राजधानी
देश बिकाशमा तानाशाही भैदिएको भए ओली वि’रुद्ध उठ्ने प्रचण्ड-नेपालहरुलाई जनताले ल’खेट्ने थिए (भिडियो सहित)
किडनी दिएर जीवन बचाउने प्रेमीको बिहेको प्रस्ताव प्रेमिकाले नै नकारेपछि…
अन्तिम दाहसंस्कारको समय जब ला’सले टाउको हल्लाउन थालेपछि मानिसहरू घाट छाडेर यस्तो भागाभाग्!